merolagani - चुक्ता पूँजी बढ्दा पनि वाणिज्य बैंकका शेयरधनी मालामाल, कसरी बढ्याे लगानीमा प्रतिफल ?
चुक्ता पूँजी बढ्दा पनि वाणिज्य बैंकका शेयरधनी मालामाल, कसरी बढ्याे लगानीमा प्रतिफल ?
Jan 09, 2020 03:48 PM Merolagani
प्रत्येक अवाले । गत आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता मालामाल भएका छन्। शेयर लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलले उनिहरुलाई मालामाल बनाएको हो। चुक्ता पूँजी बढेपछि लाभांश दर घट्ने अनुमानमा गरिरहेका शेयरधनीलाई वाणिज्य बैंकहरूले १.५७ प्रतिशतले बढाएर प्रतिफल दिएका छन्।
जुन प्रतिफल दर घट्ने प्रक्षेपण गरिरहेका लगानीकर्ताको अनुमान विपरीत हो। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको लगानी प्रतिफल औषत ६.०४ प्रतिशत देखिएको छ। गएको वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका २६ वाणिज्य बैंकहरुको अध्यनमा यस्तो देखिएको हो। जबकि अघिल्लो वर्ष २६ वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो औषत ४.४७ प्रतिशत रहेको थियो। बैंकहरुले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बुकक्लोज गरेको अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा प्रतिफलको गणना गरिएको हो।
बैंकहरूको चुक्ता पूँजी बढेकै कारणले उनीहरूको नाफा बढ्दा लाभांश दर बढेको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेले बताए। 'क्यापिटल बढेका कारण नाफा बढेको हो। किनकि जति बढी लगानी त्यति बढी नाफा' घिमिरेले भने। बैंकको चुक्ता पूँजी बढेपछि उनीहरूले एग्रेसिभ रूपमा लगानी बिस्तार गर्दा समेत उनीहरूको नाफा बढाउन थप टेवा पुर्‍याएको घिमिरेको भनाई छ। गत वर्ष बैंकको ब्याजदर र स्प्रेड रेटले समेत नाफा बढेको बताइएको छ। 'गत वर्षको बैंकको ब्याजदर बढी थियो जसले आम्दानी बढाउन मदत गर्‍यो भने गत वर्ष केही बैंकको स्प्रेड समेत टाइट थियो' घिमिरेले भने।
नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरुमध्ये गत वर्षको मुनाफाबाट जम्मा २६ वाणिज्य बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। सो मध्ये केही बैंकहरुले साधारण सभाबाट लाभांश पारित गरीसकेका छन् भने केहीको हुन बाँकी छ। सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका छैन भने नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र हिमालयन बैंकले साधारण सभा तथा बुकक्लोज मिति तय गरेका छैनन्।
सबैभन्दा बढी प्रतिफल एनएमबि बैंकका लगानीकर्ताहरू प्राप्त गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ३५ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको यस बैंकको लगानीमा प्रतिफल सर्वाधिक ८.७१ प्रतिशत रहेको छ। बुकक्लोजको अघिल्लो दिन यस बैंकको शेयर ४०२ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो। सो आधारमा यस बैकको लगानीमा प्रतिफल ८.७१ प्रतिशत कायम भएको हो। ४०२ रुपैयाँभन्दा सस्तो मूल्यमा शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल सोभन्दा बढी हुन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी प्रतिफल एनएमबि बैंकको नै रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको यस बैंकको प्रतिफल ७.७५ प्रतिशत रहेको थियो।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र हिमालयन बैंकको पुस २३ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्यका आधारमा प्रतिफल गणना गरिएको हो।
बुकक्लोजको अघिल्लो दिनसम्ममा सबैभन्दा बढी शेयर मूल्य भएको नबिल बैंकको लगानीमा प्रतिफल भने ४.५३ प्रतिशत रहेको छ। गत आवको मुनाफाबाट ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको यस बैंकको शेयर बुकक्लोजको अघिल्लो दिन दोस्रो बजारमा प्रति कित्ता ७५० रुपैयाँ कारोबार भएको थियो।
सबैभन्दा कम प्रतिफल भने स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकको रहेको छ। २२.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको यस बैंकको लगानीमा प्रतिफल ४.०५ रहेको छ। त्यसैगरी, सबैभन्दा कम लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको सिभिल बैंकको लगानीमा प्रतिफल ४.६९ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको यस बैंकको प्रतिफल सबैभन्दा कम २.३७ प्रतिशत रहेको थियो।
के हो लगानीमा प्रतिफल?
कुनै पनि लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयरमा गरेको लगानीको वास्तविक लागतको आधारमा प्राप्त प्रतिफल प्रतिशत अथवा प्रति शेयर प्रतिफल नै लगानीमा प्रतिफल दर (डिभिडेन्ड यिल्ड) हो। हरेक लगानीकर्ताको यस्तो दर फरक हुने गर्दछ। लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरेको समय, मूल्य र धारण गरेको अवधिअनुसार यो दर फरक हुन्छ। कम्पनीको कूल लाभांशलाई लगानीकर्ताले खरिद गरेको मूल्य अर्थात् लागतले भाग गरी १०० ले गुणन गरेपछि यसको गणना गर्न सकिन्छ।
५ वर्षमा सबैभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड
पछिल्लो ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने वाणिज्य बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैक हो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्ममा बैंकले औषतमा ४४.९१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। सो अवधिमा बैंकले औषतमा ५२.७८ प्रतिशत बोनस र १३.२४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो।
सबैभन्दा कम औषत लाभांश भने सिभिल बैंकको रहेको छ। सो बैंकको ५ वर्षको औषत लाभांश ६.३१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, औषत बोनस शेयर सबैभन्दा कम सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको रहेको छ भने औषत नगद लाभांश प्रभु बैंकको रहेको छ। सेन्चुरीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छैन।
नाडेप लघुवित्तले घोषणा गर्यो लाभांश, बोनस कति?
सगरमाथा इन्स्योरेन्सले लाभांश वितरण नगर्ने
Jun 07, 2020 11:51 AM